Luulyo 17, 2019 9:04 g 0
Waxaa Caawa fiidkii lagu dilay koonfurta Magaaladda Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Allaha u naxariiste Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cabdiraxmaan.
Dilka Suldaanka ayaa la sheegay inay geysteen labo dhalinyaro ah oo ku hubeysnayd bastoolado kadibna baxsaday.
Ciidamada ammaanka ayaa gaarey goobta uu dilka ka dhacay, iyagoo halkaa baaritaano ka sameeyay. Hase yeeshee lama sheegin dad loo qabtay dilka Suldaanka.
Dilka Suldaanka ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ururka Al-shabaab ay ugu baaqeen odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowlada federalka iyo maamul goboleedyada iyaoo aan la ogeyn in Suldaanku uu ka mid ahaa dadkii loo qabtay mudada 45ka cisho ah.